Schizofreniga oo ajaaniibtu uga dhega nugul yihiin dhiggooda iswiidhishka - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Sawirle: Jessica Gow / Scanpix
Schizofreniga oo ajaaniibtu uga dhega nugul yihiin dhiggooda iswiidhishka
Way dhici kartaa in aaney dawooyinka qaadan
La daabacay tisdag 5 mars 2013 kl 14.36
Dadyoowga dalkan socdaalka ku yimaada waxey uga halis badan yihiin ama uga dhega-nugul yihiin inuu la soo gudboonaado cudurka maskaxda ee loo yaqaanno Schizofreni (waa cudur sabab sawir khaldan ee xaqiiqda laga qabo) marka loo barbar-dhigo dhiggooda iswiidhishka ee halka ku dhasha, sida lagu caddeeyey baaritaan ka soo baxay hayadda maamulka bulshada ee Socialstyrelsen.
Middaa ayey sabab u noqon karaan kadeedka iyo faqooqa, sida ay sheegtay Ebba Hedlund ahan baare ka howl-gasha hayadda maamulka bulshada:
- Cilmi-baarsiyo horey loo sameeyey ayaa caddeeyey in cudurka Schizofreni uu sabab u ahaa in ruuxu u debec-sanaa, ahaydna astaantaasi mid lagu dhasho. Iyo iney ahayd mid loo sinnaa. Hase yeeshee kolka la dareemo nooc ka mid ah kadeedka uu dillaaci karo. Iyadoona kolka shakhsigu ka qaxo dalkiisii hooyo oo laaji la noqdo ay hor-seedi karto kadeed hor leh. Iyo sidoo kale cunsuriyad la dareemo ay sii kordhiso in loo xanuunsado cudurka, sida ay sheegtay Ebba Hedlund, oo ka howl-gasha hayadda maamulka bulshada.
Dadyoowga qaba cudurka Schizofreni ayey tiradoodu ku liidataa suuqa shaqada, halka ey qaar aan badneyn ee dadyoowgaa ka mid ahi leeyihiin isku-filaasho dhanka dhaqaalaha ah, qaasatan kolka laga hadleyo dadyoowga asal ahaan ka soo jeeda dalka dbaddiisa, sida ay xaqiijisay Ebba Hedlund.
Sabab kale ee soo-galootigu ugu xanuunsadaan cudurka Schizofreni ayaa ah in aaney qaadan dawooyinka cudurka, mid u dhiganta sida wadaniyiinata iswiidhishku u qaataan:
- Ma garaneeyno sababaha ugu wacan. In aan loo qorin daawada. In aaney helin taageeradii ey bulshada uga baahnaayeen si ey joogto ugu qaataan iyo in aaney dooneyn isticmaalka dawada cudurka ama aaney dhaqaale ku filan u heysan. Hayadda maamulka bulshada ayaa baaritaan ku sameeysay tirada dadyoowga u xanuunsada, dar-yeelka caafimaad oo ey helaan iyo hab-nololeedka ajaaniibta uu saameeyo cudurka schizofreni-ga. Waa tiro gaarsiisan dhowr kun oo ruux, waxaana lagu dhiiri-gelineyaa hayadaha dar-yeelka caafimaad sidii ey ula socon lahaayeen daaweynta dadyoowgaa, sida ay sheegtay:
- Haa, waa arrin muhiimad ballaaran ku fadhida in bixiyaha dar-yeelka caafimaad iyo maamullada degmooyinkuba ey is weeydiiyaan iney kooxdan u taakuleeyaan sidii ku habooneyd. Waana mid dhici karta in qolyahani leeyihiin baahi u gaar ah ee aan laga haqab-tirin, sida ay sheegtay Ebba Hedlund, ahna baare ka howl-gasha hayadda maamulka bulshada ee Socialstyrelsen.